विद्यासुन्दरको कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, बालुवाटार बोलाएर के भने ? ::Nepali TV
You are here : Home News विद्यासुन्दरको कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, बालुवाटार बोलाएर के भने ?
विद्यासुन्दरको कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, बालुवाटार बोलाएर के भने ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।